Jasiiradda Buluuga | Wararka Safarka
Jasiiradda buluugga ah
Maria | | General, Waqtiyada firaaqada
Sawir | L35 Dhismeyaal
Waxay ku taal degmada Carabanchel waa xarunta ugu weyn ee wax laga iibsado ee ku taal Madrid: Islazul. Jannada dukaamaysiga ee Madrilenians badan oo caasimadda ah! Magaceedu wuxuu kiciyaa dabeecadda, biyaha, iftiinka iyo midabka. Bannaanka, fikradahan ayaa isu yimid si ay ugu turjunto qaabeynta dhismaha, kaas oo laga heli karo iyada oo loo marayo qaab gaar ah oo ka mid ah codad buluug ah oo tilmaamaya mowjadaha jasiiradda magaalada. Laakiin gudaha, Eden run ah ee mood, shineemo iyo gastronomy ayaa ku sugaya. Maxaad sugeysaa inaad la kulanto? Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato islazul-ka Madrid.
1 Waa sidee Islazul?
2 Dukaamada islazul
3 Yelmo Cines oo ku taal islazul
4 Makhaayadaha Islazul
5 Sidee loo tagaa islazul?
5.2 Tareenka dhulka hoostiisa mara
5.3 Bas ahaan
Waa sidee Islazul?
Iyada oo aag dhan 90.000 oo mitir murabac ah ay ku fiday laba dabaq iyo ilaa 4.100 goobood oo gawaarida la dhigto ah, Islazul waxaa la furay bishii Abriil 23, 2008 iyada oo ah xarun laga dukaameysto oo loogu talagalay madadaalada booqdayaasheeda halkaasoo kaliya aysan ku qaadan karin maalin madadaalo ah dukaameysiga sidoo kale ku raaxeeyso shineemada ugufiican oo ku cab meesha makhaayadaha badan oo ay kuyaalaan.
Naqshadaynta dhismaha waxay dooneysaa inay kiciso dabeecadda waxayna ula jeeddaa magaca lagu baabtiisay: Islazul. Si tan loo sameeyo, waxay leedahay xalal dhismeedka bioclimatic iyo cut-geeska oo suurtogal ka dhigaya isticmaalka tamarta ee ka hooseeya waxa ku badan noocyada noocan ah qaab loogu talagalay in lagu daryeelo deegaanka.
Wejigeeda waxaa ka buuxa qallooca, jilcinaya muuqaal u eg dabeecadda iyo biyaha. Iftiinka sidoo kale wuxuu muhiim u yahay dhismaha islazul si aan loo helin dareenkaas jawiga xiran ee laga dareemayo inta badan xarumaha wax laga iibsado, gaar ahaan kuwa waaweyn. Islazul dhibaato noocaas ah malaha maxaa yeelay waxaa lagu beeray dabool ETFE hufan oo casri ah, aadna u iftiimaya, kaas oo u oggolaanaya iftiinka dabiiciga inuu soo galo, isagoo u gudbinaya dareenka bannaanka, sida haddii aan wax ka iibsaneyno waddada marka runta aan ku jirno meel xaalad leh oo daboolay.
Dabaq kasta oo ka mid ah islazul, taxaddar gaar ah ayaa loo sameeyay qaabeynta faahfaahinta tareennada, dabaqyada, sagxadda dhulka, pergolas, iwm. iyo waliba mawduucyada iyo muuqaalka dhirta oo ahmiyad weyn u leh diyaaradda muuqaalka ah. Si loo gaaro waddo firfircoon, waxaa loo qaabeeyey si dhismaha si tartiib tartiib ah loo ogaado kolba markuu socdo. Meel kastaa waa mid gaar ah oo muuqaalkeedu yahay Plaza Islazul, halkaas oo jasiirad dhir doog ah ay ku soo koobayso ruuxa xarunta: waa xarun wax laga iibsado si dareenkeenna loogu toosiyo.
Dabaqa hoose waa halka ay ku yaalliin dukaamo badan oo wadartoodu tahay 95, kuwaas oo ay ka mid yihiin: Primark, Parfois, Primor, Media Markt, Foot Locker, C&A, Alain Afflelou, Natura, Tenezis ama Zapshop, iyo kuwo kale oo badan. Dabaqa koowaad waxaa jooga kuwa kale sida Bershka, H&M, Mango Marypaz, Pandora, Sfera, Misako ama Zara. Dabaqa labaad lambarkiisa waxaa laga dhigay 4 dukaan oo meesha lagu ciyaaro iyo shineemooyinka ay ka dhex muuqdaan, kuwaas oo aan kaga hadli doonno xagga hoose.
Yelmo Cines oo ku taal islazul
Masraxyada Yelmo Cines waxay ku yaalliin dabaqa labaad ee xarunta laga dukaameysto ee Islazul, halkaasoo aad ku raaxeysan karto shineemooyinkii ugu dambeeyay ee la sii daayay iyo filimadii ugu fiicnaa. Waxay leeyihiin 13 qol oo ay ku daawan karaan shineemada ugu fiican oo leh tayada ugu sareysa ee codka dijitaalka ah ee 5.1 dolby oo shaashadda ugu fiican leh isla markaana leh shaashadda ugu fiican suuqa.
Tagista filimada had iyo jeer maahan mid raqiis ah, laakiin Yelmo Cines de Islazul waxay hindisay dhowr dallacsiin oo si joogto ah loogu celceliyo si dhaqanka looga dhigo mid ay dhammaan dhagaystayaashu heli karaan. Tusaale ahaan, marba marka ka dambaysa Bandhig Faneedka ayaa dhaca halkaas oo qiimaha tikidhada si weyn hoos loogu dhigay 3 euro. Qolalkaan sidoo kale waxay leeyihiin "maalin daawadayaasha" maalin kasta oo Arbaco ah si ay shaneemada ugu aadaan qiimo dhimis suurogal ah oo laga galo.
Yelmo Cines Islazul xitaa waa macquul in lagu xuso dhalashada carruurta. Fikrad ka geddisan oo carruurtu jeclaan doonaan. Waxaa ku jira tikidhada filimka, liiska hotdog, ama menu salool cunug walba. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka heli doonaan hadiyad lama filaan ah Yelmo Cines Islazul.
Filimkan ayaa leh baarkinka bilaashka ah waxaana loo sahlay inay helaan dadka naafada ah.
Xarunta dukaameysiga ee Islazul ee magaalada Madrid waxaa ku yaal makhaayado kala duwan oo laga kala xusho: cuntada degdegga ah (Burger King, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken ..), Talyaani (Ginos, La Tagliatella ..), Aasiya (Wok Garden, Ezushi ), Americans (Tony Roma's, Foster's Hollywood, Ribs ...) iyo dukaamo badan oo kafee ah iyo qol jalaato ah oo aad ugu raaxeysan karto macmacaan wanaagsan sida Starbucks, Dunkin Donuts ama Llaollao, iyo kuwo kale.
Sidee loo tagaa islazul?
M-40 (bixida 27 Via Lusitana)
M-40 (bixida 28)
M-45 (bixida 2A)
A-42 (bixida 6A)
R-5 (bixida 27 Via Lusitana)
Est. Carabanchel Alto oo 1,7 km.
Istaagay albaabka Islazul
Khadadka magaalooyinka 35 - Waxay ku xigtaa albaabka laga soo galo Koonfurta (Vertical Garden)
Khadadka magaalooyinka 118 - Albaabka laga galo albaabka laga soo galo Waqooyiga iyo Koonfurta (Vertical Garden)
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Jasiiradda buluugga ah
Badda Sargasso, oo ah bad aan xeeb lahayn
Makhaayadaha raaxada leh iyo kuwa dhow ee Barcelona